Awooda-Dadka iyo Tartanka Salmiga ah Qalinkii Salma A. Sheikh | Warsugan News
Home Maqaalo Awooda-Dadka iyo Tartanka Salmiga ah Qalinkii Salma A. Sheikh
Jul 19, 2017Maqaalo
Si aynu u ogaano ama u fahano mucaaradnimada, tartanka siyaasadeed iyo taageerada xisbi Qaran ama musharax qaran, waa in aynu marka hore fahanaa muxuu yahay nidaamka aynu hogaan ku xulanaa. Somaliland ahaan waxaynu haysanaa ama ayidsan nahay nidaamka dimuquraadiyada ama wax wada lahaanshaha sidaa darteed waa in aynu ka dharagsan nahay dimuquraadiyadu waxa ay tahay.
Dimuquraadiyad, oo ah kalmad qalaad oo ka timi luuqada Ingiriisiga (democracy), waa mid lagu qiyaaso inay dhalatay qarnigii 16 dhamaadkiisii. Waa kalmad Latin ah oo ka kooban laba eray oo kiiba macno gooni ah sito; 1. Demos oo ah macnaheedu dadka, iyo 2. Kratia oo macnaheedu yahay xukunka ama awood. Labada kalmadood marka laysu geeyo ayay sababeen macnaha ah demokratia amd democracy oo turjun keedu yahay xukunka ama awooda dadka. Dimuquraadiyadu waa awooda dadka oo macnaheedu yahay in dadku ay xor u yihiin doorashada cida hogaan u noqonaysa iyo cida aan sifo sharci Qaran u lahayn talada dalka. Dal ay ka shaqeyso dimuquraadiyad waa dal ay xukuntaan shacbiyadiisu oo ay talada u dhiibtaan cida ay doonayaan cida ay diidaana ka xayuubsadaan mas’uuliyada ay qaranka u hayaan. Dadka ayay u taalaa iyaga oo maraaya sifaha sharci ee qaranka inay la xisaabtamaan cida ay hogaanka iyo talada u dhiibteen.
Previous PostDegdeg: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo, waxa uu xeer Madaxweyne oo summadeedu tahay JSL/M/XERM/249-4911/072017 oo uu soo saaray maanta uu ku magacaabay laba degmo. Next PostBahda Wargeyska Warsugan Media Group Waxay Hambalyo Meher U Dirayaan Boqorka Iyo Boqorada Cabdiraxmaan iyo Sagal